Send Email ကိုမနှိပ်ခင်စစ်ဆေးရန်အီးမေးလ်စျေးကွက်အမှားများ | Martech Zone
သင်၏အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးနှင့်သင်လုပ်နိုင်သောအမှားအယွင်းများရှိသေးသည်။ သို့သော်၎င်းသည် အီးမေးလ်ဘုန်းကြီးများမှသတင်းအချက်အလက်များ send ကိုမနှိပ်မီကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောမှားယွင်းသောအမှားများကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်များအကြောင်းကိုအနည်းငယ်မျှသာသင်တွေ့လိမ့်မည် 250ok ဒီဇိုင်းနှင့်ပေးပို့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ်။ ရဲ့လက်ျာဘက်ခုန်ကြကုန်အံ့:
ကျနော်တို့မစတင်မီကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုံးနိမ့်မှုသို့မဟုတ်အောင်မြင်မှုအတွက်သတ်မှတ်ထားသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာ 250ok အီးမေးလ်ဂုဏ်သတင်း၊ ပို့ဆောင်နိုင်မှုနှင့် inbox နေရာချထားမှုတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတိုင်းနီးပါးကိုသင်ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်သည့်မယုံနိုင်စရာဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုရှိသည်။
dedicated အိုင်ပီ - သင်၏အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု၏တူညီသော IP ကွန်ယက်ရှိမကောင်းသူတစ် ဦး မှသင်၏ပေးပို့နိုင်မှုကိုမဖျက်ဆီးပါစေနှင့်။
Inbox နေရာချထားမှု - သင်၏အီးမေးလ်များကို junk ဖိုင်တွဲအတွင်းသို့ပို့ရုံသက်သက်မဟုတ်ကြောင်းစစ်ဆေးရန် Inbox စောင့်ကြည့်မှုဖြေရှင်းချက်ကိုသုံးပါ၊
ပို့ဆောင်ရေး - ကောင်းသောအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမကောင်းတဲ့သူအတွက်မချန်မထားနှင့်။
လူမည်းစာရင်း - သင်၏ IP လိပ်စာသည်ပေးပို့သူအနက်ရောင်စာရင်းတွင်မပါစေရန်သေချာပါစေ၊ သို့မဟုတ်လျှင်သင်ပို့နိူင်ခြင်းသို့မဟုတ်စာအ ၀ င်အထွက်နေရာများညံ့ဖျင်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဒိုမိန်း - သင်၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် (သင်၏ IP နှင့်အတူ) ကောင်းသောအီးမေးလ်ဒိုမိန်းတစ်ခုမှပေးပို့ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
SPF - ပေးပို့သူပေါ်လစီမူဘောင်သည် ISP များလုပ်နိုင်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည် ISP များသည်စစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပြီးသင့်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်.
DKIM - DomainKeys သတ်မှတ်ထားသောမေးလ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့်အကူးအပြောင်းကာလအတွင်းရောက်ရှိနေသောသတင်းစကားအတွက်တာဝန်ယူခွင့်ရှိသည်။
DMARC - DMARC ISP များအားသင်၏အီးမေးလ်ကိုဖြတ်သန်းရန်လိုအပ်သောကိရိယာများကိုထောက်ပံ့ရန်နောက်ဆုံးပေါ် authentication model သည်။
တုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်များ - သင်၏တုန့်ပြန်ချက်ကိုသေချာစွာအကောင်အထည်ဖော်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ၊ သို့မှသာ ISP မှသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏ ESP သို့ပြန်ပို့နိုင်ပြီးအီးမေးလ်ပို့မှုတိုးတက်လာလိမ့်မည်။
အခွင့် - ISP များနှင့်ပြtroubleနာမကြုံရပါစေနှင့်။ အီးမေးလ်ပို့ရန်ခွင့်ပြုချက်တောင်းပါ။
preferences ကို - သင်၏စာရင်းသွင်းသူများအတွက်အကြိမ်ရေအပေါ်မျှော်လင့်ထားပါ။
မလှုပ်ရှား - အသင်းဝင်ခွင့်မရှိသောတိုင်ကြားချက်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခြင်းကိုလျှော့ချရန်မလှုပ်မရှားဖြစ်နေသောစာရင်းပေးသွင်းထားသူများကိုဖယ်ရှားပါ။
frequency - သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများမှထွက်ခွာသည့်ကြိမ်နှုန်းကိုမဖွင့်ပါနှင့်။
segment သင်သည်သင်၏ segment အပေါ်နှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပြီးရေတွက်နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုရှိပါသလား
ပျင်းစရာဘာသာရပ်လိုင်းများ - တစ်ယောက်ယောက်ကိုသင်ဖွင့်ချင်ရင်အကြောင်းပြချက်ပေးပါ။ ထွက်ခွာသည် ActiveCampaign ရဲ့ဘာသာရပ်လိုင်းမီးစက် ကူညီဖို့။
Proofing - သင်၏စာသားကိုသဒ်ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းပြproofနာများအတွက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ အသံနေအသံထားကော။
အားကောင်းတဲ့ CTAs - သင်၏ Call-to-Action အားမိုဘိုင်း (သို့) desktop ပေါ်တွင်ထင်ရှားစေပါ။
FNAME - သင်၏စာရင်းပေးသွင်းထားသူအားလုံးအတွက်နာမည်မရှိဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုမဖြေရှင်းပါနှင့်။ ဒါမှမဟုတ်ယုတ္တိဗေဒကိုသုံးပါ။
Fields ပေါင်းစည်း - မဟုတ်ပါမြေပုံများကိုမပေးပို့မီသင်၏ဒေတာအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးတက်ကြွသောပါဝင်မှုသည်သင့်ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေလိမ့်မည်။
နောက်ခံ - အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုနောက်ခံရှိသူများကိုစစ်ဆေးပါ။ များစွာသောသူတို့သည်မသုံးပါ။
buttons - ပုံများကိုခလုတ်အဖြစ်သုံးပါ၊ သို့မှသာသင်၏အီးမေးလ်ဖောက်သည်အားလုံးတွင်သင်၏ခလုတ်များကြည့်ကောင်းမည်။
နိုငျငံတကာ - သင်၏စာရင်းသွင်းသူများအတွက်သင့်တော်သော langage ဆက်တင်များနှင့်သင်္ကေတများကိုအသုံးပြုပါသလား။
စာစီစာရိုက် - ၎င်းကိုမပံ့ပိုးနိုင်သောဖောက်သည်များနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ကျောနောက်ကျောဖြင့်ဖောင့်များကိုအသုံးပြုပါ။
လူမှုရေး - လူတွေကခင်မင်ရင်းနှီးနိုင်အောင်လိုက်နာနိုင်ဖို့သင့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာအကောင့်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာ 250ok အဓိကအီးမေးလ် client တိုင်းတွင်သင့်အီးမေးလ်ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုရန်ကြိုတင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုထားပါ။
ရေနံချောင်း - အီးမေးလ်ကိုစစ်ဆေးပြီးသင်၏ပထမဆုံးလိုင်းအနည်းငယ်ကိုအီးမေးလ်ကြိုတင်ကြည့်ရှုရာတွင်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်
alt - ပုံတိုင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့်အခြားရွေးချယ်စရာစာသားများကိုအသုံးပြုပါ။
စမ်းသပ် - ဘာသာရပ်လိုင်းများ၊ link များ၊ CTAs၊ personalizaiton၊
စာရင်းပေးသွင်းသူ - သေးငယ်သောစာလုံးများနှင့်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိသောအသင်းဝင်များမှသင်နှင့်စီးပွားရေးမလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုရှောင်ရှားပါသည်။
အကော်ဒီယန် - ကောင်းမွန်သောမိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြစ်ရန်အတွက်ရှည်လျားသောအပိုင်းများပါသောအီးမေးလ်များအတွက်အကော်ဒီယန်များထည့်သွင်းပါ။
Retina - မျက်မှောက်ခေတ် Apple ထုတ်ကုန်များအသုံးပြုသည့် retina display များအတွက်အကောင်းဆုံးပုံရိပ်ဖော်များကိုအသုံးပြုသည်။
တုံ့ပြန်တတ်သော - မိုဘိုင်းနှင့်တက်ဘလက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်သင်၏အီးမေးလ်ကိုကြည့်ကောင်းအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်မကြာမီဝတ်ဆင်ထည့်သွင်းဖို့လိုပေမည်!
သင်၏အီးမေးလ်၏စက်ပြင်ခြင်းနှင့်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများ၏အ ၀ င်သို့ရောက်သောအခါ၎င်းမည်သို့လုပ်ဆောင်ပုံသည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်သင်၏ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ကူးပြောင်းခြင်းနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
လိပ်စာမှ - မှတ်သားထားသော 'လိပ်စာမှ' ကိုအသုံးပြုပါ။
Address to Reply - ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်ရောင်းရန်အခွင့်အလမ်းများရှိလျှင်အဘယ်ကြောင့် noreply @ ကိုသုံးရသနည်း။
ယုတ္တိနည်းဖြင့်အစပျိုးသည် - သင်၏ယိုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
links များ - သင်စာရင်းသွင်းသူအားလုံးကိုမပေးပို့ခင်အီးမေးလ်ရှိ link အားလုံးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။
ကမ်းတက်စာမျက်နှာများ - ပုံစံလယ်ကွင်းအနည်းငယ်သာရှိသောမြင့်မားသောပြောင်းလဲခြင်းဆင်းသက်နိုင်သောစာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ပါ။
သတင်းပို့ခြင်း - စာရင်းဇယားများကိုသိမ်းဆည်းပါ၊ သူတို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ၊ သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုတိုးတက်စေပါ။
လိုက်နာခြင်း - သင်၏အောက်ခြေရှိအပြည့်အဝတရား ၀ င်လိုက်နာရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်အားလုံးရှိပါသလား။
[box type =” download” align =” aligncenter” class =”” width =” 90%”] အီးမေးလ်ဘုန်းတော်ကြီးများရဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးသပ်ချက်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ စစ်ဆေးရမည့်စာရင်း မပို့ခင်စစ်ဆေးရမည့်ပစ္စည်းများ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သော PDF အလွန်ကောင်းသည်။ [/ box]
Tags: dkimDMARCDomainKeys သတ်မှတ်ထားသောမေးလ်အီးမေးလ်အကော်ဒီယန်အီးမေးလ်နောက်ခံအီးမေးလ်ခလုတ်များအီးမေးလ် CTAsအီးမေးလ်ဖောင့်အီးမေးလ်အကြိမ်ရေအီးမေးလ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအီးမေးလ်ပေါင်းစည်းနယ်ပယ်အီးမေးလ်ခွင့်ပြုချက်အီးမေးလ် Retinaအီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းများအီးမေးလ်အစားထိုးညှို့အီးမေးလ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းအီးမေးလ်စာစီစာရိုက်အီးမေးလ်ကိုစာရင်းပေးသွင်းထားသူFNAMEimage ကိုမလှုပ်မရှားစာရင်းသွင်းအခွင့်တုံ့ပြန်တတ်သောလှာspfအားကြီးသော CTAsစာရင်းပေးသွင်းထားသူခွင့်ပြုချက်စာရင်းပေးသွင်းထားသူ ဦး စားပေးအစားထိုးညှို့
မတ်လ 10, 2016 မှာ 5: 26 AM
ဒါတွေဟာ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူအများစုလုပ်မိတဲ့ အဖြစ်များဆုံးအမှားတွေပဲလို့လည်း ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ ပျင်းစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ အီးမေးလ်တွေ ပို့တာဟာ ဘုံအမှားတစ်ခုပါပဲ။
ငါ့မျက်လုံးတွေကို မဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ အီးမေးလ်ကို ဘယ်တော့မှ မဖွင့်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုအီးမေးလ်များကို အမြဲတမ်း လျစ်လျူရှု သို့မဟုတ် ဖျက်ပစ်ပါသည်။
ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ အီးမေးလ်တွေကို ဖတ်ရာမှာ ဘယ်သူကမှ သူတို့ရဲ့ အချိန်ကို မဖြုန်းချင်ဘူးလို့ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူတွေက နားလည်ထားသင့်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကို အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲလိုပါက မျက်စိဖမ်းစားနိုင်သော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အလားအလာရှိသော အကြောင်းအရာလိုင်းပါရှိသော အီးမေးလ်များကို ပေးပို့ရပါမည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာဖတ်သူတွေ အရင်ဖတ်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော စာကြောင်းမို့ပါ။
ဒါကြောင့် ဂရုစိုက်တာက မင်းရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့ကို သင်ယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ရှောင်ရှားနိုင်စေရန်အတွက် ကြီးမားသော အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အမှားများကို ဤနေရာတွင် စာရင်းပြုစုထားခြင်းကြောင့် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား မျှဝေပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ 😀